Nhau dzeWebhu dzeGoogle: Gwaro Rinoshanda Kupa Zvizere Zvakanyura Zvakaitika | Martech Zone
Mumazuva ano nezera, isu sevatengi tinoda kugaya zvirimo nekukurumidza sezvinobvira uye zviri nani nekuedza kushoma.
Ndosaka Google yakaunza yavo vhezheni yepfupi-fomu yemukati inonzi Google Webhu Nyaya.
Asi ndedzipi nyaya dzewebhu dzeGoogle uye dzinopa sei kune inonyudza uye yemunhu chiitiko? Sei uchishandisa Google web stories uye iwe unogona sei kugadzira yako?
Gwaro rino rinoshanda rinokubatsira kuti unzwisise zvirinani mabhenefiti ekushandisa idzi nyaya dzewebhu uye mashandisiro ezvido zvako.
Chii chinonzi Google Web Story?
Nyaya dzeWebhu izere-screen zvemukati zvewebhu izvo zvakapfuma zvinoonekwa uye zvinokutendera kuti ubate kana kutsvaira kubva pane imwe nyaya kuenda kune inotevera. Zvakafanana neFacebook ne Instagram nyaya. Pane nyaya dzepawebhu dzinopfuura mamirioni makumi maviri izvo zviri online zvakazara uye kubva Gumiguru 2020, 6,500 madomasi matsva akaburitsa nyaya yavo yekutanga yewebhu.
Vanogona kupa imwe fomu yevatengi vanoita zvemukati panguva yekufamba kwavo kwemangwanani kana kupuruzira zvisina chinangwa pafoni yavo vakagara pamberi pevanoti. Sebhizinesi, zvinogona kubatsira kusvika kune vateereri vako, kunyanya nekurudziro yeGoogle.
Sei Uchifanira Kushandisa Google Webhu Nhau?
Saka sei uchishandisa Google Web Stories? Iko kufambira mberi kwekutsvaga kweGoogle kunogona kuve kwakanakira kudhonzera mutraffic yakawanda uye kupa webhu yako zvirimo mukana wekuonekwa. Kune akawanda mabhenefiti eGoogle dandemutande nyaya anogona kubva mukuashandisa uye akakodzera kuedza kunodiwa kuagadzira kubva kutanga.
Inopa kukwidziridzwa kune yako masanji - Makwikwi ekuisa chinzvimbo pamapeji epamusoro eGoogle anotyisa. Chete 5.7% yemapeji ichaita chinzvimbo chepamusoro gumi yekutsvaga mhinduro mukati megore rekuburitswa, maererano neAhrefs. Nyaya dzewebhu dzeGoogle dzinokupa mukana wekuisa chinzvimbo chekutanga mumibairo yekutsvaga. Kushandisa Google Web Services, kazhinji, kunogona kukubatsira iwe kuisa bhizinesi rako paSearch Engine Result Mapeji (SERPs) Kuita izvi kunogona kuunza traffic yakawanda uye netariro, kutengesa kwakawanda!
Zvemukati zvinogovaniswa zviri nyore - Imwe yemabhenefiti makuru eGoogle webhusaiti nyaya ndeyekuti iwe unogona kugovera zviri nyore nyore neshamwari online, mhuri uye kubasa vaunoshanda navo. Imwe neimwe nyaya yepawebhu inogona kupa zvine musoro zvirimo izvo mushandisi anogona kugovera zviri nyore pasina kuita chero kugadzirisa kana kugadzirisa vasati vadzvanya share.
Inopa kunonyanyisa kusvika -Google webhu nyaya chinhu chakaitwa chakanangana nemawebhusaiti enhare mukuona. Zvakafanana nezvose zviri zviviri Instagram uye Facebook nyaya, inogona kupa mukana wakakura wekugadzira uye kuwedzera nyaya kune avo WordPress mawebhusaiti pamwe nemamwe akabatanidzwa maapplication. Nyaya dzinoratidzwa pamibairo yekutsvaga inowanikwa kune mamirioni ekudzvanya pazviri, pane kungoita vashoma vashoma vanhu
Yakanakira Injini Yekutsvagisa -Kutsvaga injini optimization (SEO) kwakakosha kune vanhu vazhinji nemabhizinesi kana vachiedza kuita zvirinani kuvepo kwavo online. 70% yevatengesi vekutengesa taura kuti kutsvaga kweorganic kuri nani pane kubhadharwa kutsvaga kwekugadzira kutengesa. Nyaya dzewebhu dzeGoogle dzinobatanidza maitiro akanakisa nekugadzira zvimwe zvinobatika izvo zvinozomira kwete chete paGoogle Kutsvaga asi kuburikidza neGoogle Mifananidzo neGoogle App.
Nyaya dzeWebhu dzinogona kuitwa mari -Nyaya dzewebhu dzeGoogle dzinopa mukana wevashambadzi kuti vaite mari zvirimo nerubatsiro rwekushambadza-yakazara-skrini uye affiliate links. Vashambadziri vanogona kubatsirwa kubva pane izvi zvakare, vachipa imwe yekuona chiitiko kuburikidza nevhidhiyo Storytelling.
Inobatsira kutevedzera ruzivo rwemushandisi uye kuyera mashandiro -Kuburikidza nerudzi urwu rwemukati, vaparidzi vanogona kuteedzera zviri nyore ruzivo rwemushandisi uye kuvabvumira kuyera kuita kwenyaya yega yega yavanorova kushambadza pairi. Iwe unogona zvakare kubatanidza izvi kune mapuratifomu seGoogle Analytics, iyo yakanaka yekuunganidza ruzivo mune yako webhusaiti.
Inopa inopindirana uye inonyudza chiitiko kune vashandisi vako - Imwe yemabhenefiti makuru eGoogle wewebhu nyaya ndeyekuti inopa inodyidzana uye inonyudza ruzivo kune vashandisi vayo. Inopa muparidzi sarudzo yekubatanidza zvinhu zvinopindirana semibvunzo uye sarudzo, izvo zvinogona kukuudza zvakawanda nezvevateereri vako.
Nhau dzeWebhu dzeGoogle dzinoonekwa kupi?
Nyaya dzeWebhu dzinogona kuongororwa kana dziri paGoogle pamapeji ekutsvaga, Google Discover, kana Google Images. Nekudaro, zvakakosha kucherechedza kuti nyaya dzewebhu dzeGoogle dzinogona kungoonekwa parizvino kune vashandisi veUS, Indian neBrazil. Ingori nyaya yenguva asi kusvika izvo zvawedzera kure kure.
Kana iwe ukaita rombo rakanaka rekuve mune imwe yenyika idzi nhatu, zvino zvinozoonekwa pakutanga kwekutsvaga kwako mhinduro. Sezvo iri kuwanikwa zviri nyore, hauzonetseki kuiwana.
Maitiro ekugadzira Google Webhu Nhau?
Kugadzira nyaya yewebhu hazvidi kuti iwe uve nehuwandu hukuru hwekugadzira kana ruzivo rwehunyanzvi. Sezvakangoita chero yesocial media mapuratifomu ane nyaya, zviri nyore kugadzira imwe. Heano mashoma matipi aunogona kutaura nawo paunenge uchigadzira yako yekutanga webhu nyaya.
Shandisa mupepeti wekuona - Webhu Nhau WordPress plugin inzvimbo yakanaka yekutanga.
Funga nezvenyaya -Gadzira bhodhi renyaya uye nyora pasi zvinangwa zvako kana zvinangwa zvemukati.
Gadzira nyaya yewebhu - Dhonza zviwanikwa zvako zviripo uye rekodha / unganidza iyo nyaya uye shandisa inooneka mupepeti kuigadzira.
Shambadzira iyo web nyaya -Shandisa nyaya paGoogle uye uone traffic ichibhururuka mukati.
Mienzaniso yeGoogle Web Stories
Zvakakosha kuve nemimwe mienzaniso yenyaya dzewebhu dzeGoogle kuitira kuti kana ukafunga kuzvigadzira wega, une chitubu chekurudziro chekushanda kubva. Heino mienzaniso mishoma yekutanga iwe, tinya kuti uivhure.
VICE yakatora kurudziro kubva padenda uye avo vanobika kubva kumba neyakagadzika yekubikira senge sezvaratidzwa pamusoro. Iyo nzira huru yekutarisira kune yakafara demographic, pane kungova yavo yevavariro yevateereri.
Mutsvaki akagadzira iyi dandemutande nyaya, yakanangana nekugovera ruzivo rwesainzi asi mifananidzo nezvinyorwa zvakashandiswa hazvina zvakawanda zvakawandisa. Zvaireva kuti vakawanda vaigona kudzvanya pairi kuti vagutse kuda kwavo kuziva.
Nylon's sosi yekudzidzisa iyo yainopa neiyi pamusoro pewebhu nyaya inopa ine simba ruzivo kune vashandisi kwete kubva pakona yekuona asi zvakare inopa kukosha.
Mamiriro enyaya dzewebhu dzeGoogle inzira huru yekugovera ruzivo nenzira itsva inodyidzana uye inonakidza. Ungave uri mutengi, muparidzi, kana mushambadzi, pane mabhenefiti ekushandisa Google inonyudza yekutaura nyaya inova nyaya dzewebhu.
Tags: content monetizationgooge web nyayagooglegoogle web nyayagoogle web nyayadyidzanakutaurirana nyayaorganic searchseonyokazvinogovaniswa zvemukatizvemukati zvemagarirokutaura nyayaStorytellingTrackingnyaya dzewebhuweb storyWordPressWordpress plugin
Sabrina Sedicot mushambadzi ane ruzivo, anotarisa pazvinhu zvese zvedhijitari. Anoshanda Appnova, sangano rekugadzira rekugadzira rakavakirwa muLondon neRome. Anoshanda pamapurojekiti muUX/ UI dhizaini, eCommerce, Branding & Content Production. Anofemerwa nemhando dzese dzekutaura nyaya dzedhijitari uye anofarira kugadzira zvigadziriso zvinokwanisa kuendesa zviitiko zvekuvaka mhando.
Iyo Yakanakisa WordPress SEO Plugin: Chinzvimbo Math
Yakapfuura, Yazvino, uye Remangwana reInfluencer Marketing Landscape